Gargaar News | Faalo: Ma Qurux badana dib u dhac ku yimaada jadwalka doorashada!
Posted on September 25, 2016 by Laylo Mahamud	Faalo: Ma Qurux badana dib u dhac ku yimaada jadwalka doorashada!
Dib u dhaca ku yimid Jadwalka Doorashada Soomaaliya waa arin Hore loo saadaaliyey taas oo wal wal ka qabeen Aqoonyahano iyo siyaasiin badan oo Soomaaliyeed
Maanta ayay ahayd madasha waqtiga la qorsheyay ee 25-09-2016-ka.Tan ayaa waxa ay ka dhigan tahay in in markii ugu horeysay dib u dhac uu ku yimaado doorashada dadban ee dalka waxa ayna abuuraysaa wal wal kale oo laga qaba arimaha doorashooyinka.
Ma ah wax lala yaabo arintan dib u dhaca doorashadda waxa hore ayay Madaxda Soomaalidu ee Madasha Qaran Qaar ka mida ah ay diidanayeey Dhismaha Aqalka sare 25-ka September oo maanta ku beegan isla markaana ay soo magacaabi lahayeen Madaxda dawlad gobaleedyada dalka. Muuqaalkan
waxay astaan u tahay Afarta bilood ee sanadaka 2016-ka ka dhiman in aa lagu Guulaysan karin qabashada Doorashada Guddoomiyaha Baarlamaanka iyo doorashada Madaxweynaha oo dhici doonta 25 October iyo 30 October, Wali waxaa muuqda in uu jiro khilaaf siyaasadeed oo salka ku haya qaabka ay u dhacayaan Doorashooyinka Golayaasha sare iyo kuwa hoose ama kan madaxweynaha.
Hubaal la’aan waxa aan aamisanahay in xalka ama furaha xalinta khilaafka Doorashada 2016 uu yahay In wax laga badalo rayiga oranaya in dumarku helaan xildhibaano badan ama qoondada haweenka matalaad dhan 30% ku yeeshaan kuraasta Golayaasha baarlaanka soo socda.
Figradan waa mid u muuqata in lagu dagdagey waqtigan ay wali socdaan colaadaha dhex yaala Bulshada Soomaaliyeed way adag Tahay in Tiro Badan oo Dumar ah ay ka mid noqdaan Golayaasha sare ama kuwa hoose
Arinkan waxa diidan Hogaanadda dhaqanka iyo siyaasada waxana waqtiyo badan Qabaa’ilada hogaaminayey Raga soomaalida taas oo laga soo qaatay dhaqanka islamka ku dhisan.
Ergeyga Gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee QM u qaabilsan Soomaaliya Mr Michael Keating ayaa Dhawr jeer uu ka Hadlay wabaahinta ku celceliyey in QM ay ka go’an tahay sidii haweenka gacan looga siin lahaa in ay saameyn ku yeeshaan siyaasadda, soomaaliya.
Mr Michael wuxuu ballanqaaday in madaxda dhaqanka ee soomaalida kala hadli doono baahida loo qabo in haweenka lagu daro Golayaasha Baarlamaanka, waxana Hogaanka DHaqanka Soomaaliyeed ay u arkaan in tani ay tahay mid lagu bur burinayo dhaqanka Islamka, balse dalalka reer Galbeedka ee deeqda Siiya dowlada Federaalka ayaa ku qasbaya in la hrgaliyo in Dumarku helaan intaas oo xildhibaan.
Dhibaatada kaled ee inay doorashadu daahdo waxaa ugu wacan Madaxweynaha Soomaaliya,Xasan Sheekh Maxamuud oo u xilligan waqtiga uu dhamaaday ayaa muujiyay sida uu u doonayo mar kale inuu ku Guulaysto madaxweynaha Dawlada Faderaalka soomaaliya wuxuu dhawr jeer sheegay inuu rajo wanagsan ka qabo mar kale inuu ku soo baxo doorashada dalka ka dhacaysa dhammadka sanadk.
Hadalka Madaxwayne Xasan Sheekh sheegay ayaa waxay keeni kartaa in musharrixinta ka qayb-galaysa doorashada dhawaan dhacaysa qaarkood ay ugu baaqayaan in shacabka Soomaaliyeed sameeyaan kacdoon looga hortagayo In madaxweyne Xasan Sheekh inuu mar kale xilkan ku soo noqdo.
Figradaha is diidan waxay dhibaato ku yihiin in la helo jawi degan oo Doorasho ku dhici karto Markaa Waxaan hubaa in dad badan oo daacad ahi ku jiraan musharaxiinta u Tartamaya xilalka kala gedisan ee Doorashooyinka 2016 .
Lakiin dhaqanka Doorashooyinka Qaarada afrika boqolkiiba 90 waxaa wadanka badbaadinkara dowlada talada haysa, waana inay dowladu u diyaar garowdaa in laga helikaro kana waantowda wax kasta oo keeni kara gacan toogaalaysi,markay arkaan in laga helayo codadka, waana inay wax ku qaataan Doorashadii wanaag sanayd ee dhacdey 2012 iyo Sidii Quruxda Badneyd madaxweyne Shariif Sheekh Axmed u aqbalay in laga Guulaytay.
Qalinkii Maxamed Maxamuud Nuur Caalim
Falanqeeye arimaha Siyaasadda Soomaaliya